Jeremaya 4 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
4 “Izrel, ọ bụrụ na ị chọrọ ịlọghachi,” ka Jehova kwuru, “i nwere ike ịlọghachikwute m.+ Ọ bụrụkwa na i wepụsịa ihe arụ gị n’ihi m,+ ị gaghị abụ onye gbara ọsọ. 2 Ọ bụrụkwa na ị ga-aṅụ iyi,+ sị, ‘Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ n’eziokwu,+ n’ikpe ziri ezi na n’ezi omume!’+ mba dị iche iche ga-enweta ngọzi n’ime ya, ọ bụkwa ya ka ha ga-eji na-anya isi.”+ 3 N’ihi na nke a bụ ihe Jehova gwara ndị Juda na Jeruselem: “Kọọnụ ala ubi unu, kwụsịkwanụ ịgha mkpụrụ n’etiti ogwu.+ 4 Bienụ onwe unu úgwù maka Jehova, biekwanụ obi unu úgwù,+ unu ndị Juda na ndị bi na Jeruselem; ka ọnụma m ghara inwuru dị ka ọkụ, o wee ree unu, n’enweghị onye ga-emenyụ ya, n’ihi omume ọjọọ unu.”+ 5 Kọọnụ ya na Juda, kwusaakwanụ ya ọbụna na Jeruselem,+ kwupụtakwanụ ya, fụọkwanụ opi n’ala ahụ dum.+ Tienụ mkpu n’oké olu, sị: “Zukọtanụ, ka anyị banye n’obodo ndị e wusiri ike.+ 6 Gwunye ihe mgbaàmà nke na-egosi ụzọ Zayọn. Chọta ebe ị ga-agbaba. Eguzola otu ebe.” N’ihi na m ga-esi n’ebe ugwu weta ọdachi,+ weta ọbụna oké mbibi. 7 Ọ pụtawo dị ka ọdụm nke si n’obere ọhịa ọ nọ pụta,+ onye ahụ nke na-ebibi mba dị iche iche amalitewo njem;+ o siwo n’obodo ya bilie ka o mee ka ala gị bụrụ ihe ijuanya. Obodo gị niile ga-aghọ mkpọmkpọ ebe nke na ọ dịghị onye ga-ebi na ha.+ 8 N’ihi nke a, keenụ ákwà iru uju n’úkwù.+ Tienụ aka n’obi, tiekwanụ mkpu ákwá,+ n’ihi na iwe dị ọkụ nke Jehova na-eweso anyị adajụbeghị.+ 9 “Ọ ga-erukwa n’ụbọchị ahụ,” ka Jehova kwuru, “na obi eze na obi ndị isi ga-ala n’iyi;+ a ga-emekwa ka ndị nchụàjà nọrọ ná mgbagwoju anya, ọ ga-ejukwa ndị amụma anya.”+ 10 M wee sị: “Ewoo, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova! N’ezie, ị ghọgbuwo nnọọ ndị a,+ ghọgbuokwa Jeruselem, na-asị, ‘Udo ga-adịrị unu,’+ ma mkpụrụ obi ha nọ n’ihe ize ndụ n’ihi mma agha.” 11 N’oge ahụ, a ga-agwa ndị a, gwakwa Jeruselem, sị: “E nwere ifufe na-ekpo ọkụ nke si n’ụzọ ndị e ji ụkwụ waa n’ala ịkpa+ fere na-aga n’ebe ada bụ́ ndị m nọ;+ ọ bụghị maka ịfụcha ihe, ọ bụghịkwa maka ime ka ihe dị ọcha. 12 Ifufe ahụ nke na-efesi ike sikwa n’ebe ndị ahụ ferute n’ebe m nọ. Ugbu a, m ga-ekwupụtara ha mkpebi ikpe m.+ 13 Lee! Ọ ga-abịa dị ka mmiri rujuru n’ígwé, ụgbọ ịnyịnya ya dịkwa ka oké ifufe mmiri.+ Ịnyịnya ya na-efe ọsọ karịa ugo.+ Anyị efuola, n’ihi na e bukọrọwo ihe anyị! 14 Jeruselem, sachapụ ihe ọjọọ n’obi gị, ka e wee zọpụta gị.+ Ruo ole mgbe ka ị ga na-eche echiche na-ezighị ezi?+ 15 N’ihi na e nwere olu si na Dan na-ekwu okwu,+ o sikwa n’ógbè Ifrem bụ́ ugwu ugwu na-ekwusa ihe ọjọọ. 16 Kwuonụ banyere ya, ee, gwanụ ya mba dị iche iche. Kwusaanụ ya megide Jeruselem.” “Ndị nche si n’ala dị anya na-abịa,+ ha ga-etikwa mkpu megide obodo ndị dị na Juda. 17 Ha agbawo ya gburugburu imegide ya dị ka ndị na-eche ubi nche,+ n’ihi na o nupụworo m isi,”+ ka Jehova kwuru. 18 “A ga-akwụ gị ụgwọ maka ụzọ gị na omume gị.+ Ihe a bụ ọdachi nke ga-adakwasị gị, n’ihi na ọ dị ilu; n’ihi na o ruwo gị n’obi.” 19 Eriri afọ m, eriri afọ m! Obi na-egbusi m mgbu ike.+ Obi m na-agba ghara ghara.+ Apụghị m ịgbachi nkịtị, n’ihi na mkpụrụ obi m anụwo ụda opi, ya bụ, opi agha.+ 20 Ọ bụ oké mbibi ka e tiri mkpu ya, n’ihi na e bukọrọwo ihe niile dị n’ala a dum.+ Na mberede, e bibiwo ụlọikwuu m,+ n’otu ntabi anya, e bibikwara ákwà ụlọikwuu m. 21 Ruo ole mgbe ka m ga na-ahụ ihe mgbaàmà, na-anụkwa ụda opi?+ 22 N’ihi na ndị m dị nzuzu.+ Ha amaghị m.+ Ha bụ ụmụ na-amaghị ihe; ha abụghị ndị nwere nghọta.+ Ha bụ ndị maara ihe n’ime ihe ọjọọ, ma n’ime ihe ọma, ha bụ ndị na-amaghị ihe.+ 23 Ahụrụ m ala ahụ, ma, lee! ọ tọgbọ chakoo, bụrụkwa mkpọmkpọ ebe;+ ahụkwara m eluigwe, ìhè ya adịkwaghị.+ 24 Ahụrụ m ugwu dị iche iche, ma, lee! ha na-ama jijiji, ugwu nta niile nọkwa na-eme mkpatụ.+ 25 Ahụrụ m, ma, lee! e nweghị mmadụ nọnụ, anụ ufe niile nke eluigwe efepụsịwokwa.+ 26 Ahụrụ m, ma, lee! ubi mkpụrụ osisi aghọwo ala ịkpa, a kwatuwokwa obodo ya niile.+ Ọ bụ Jehova kwaturu ya n’ihi oké iwe ya. 27 N’ihi na nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Ala ahụ dum ga-aghọ ebe tọgbọrọ n’efu,+ ọ̀ bụ na mụ agaghị ekpochapụ ya?+ 28 N’ihi ya, ala ahụ ga-eru uju,+ eluigwe ga-agbakwa ọchịchịrị.+ Ọ bụ n’ihi na ekwuwo m ya, echebaworo m ya echiche, enweghịkwa m mwute, agaghịkwa m ala azụ n’ime ya.+ 29 Obodo ahụ dum na-agba ọsọ+ n’ihi mkpọtụ nke ndị na-agba ịnyịnya na ndị na-agba ụta na-eme. Ha agbabawo n’obere ọhịa dị iche iche, ha agbagowokwa n’elu nkume dị iche iche.+ A gbapụwo n’obodo niile, ọ dịghịkwa onye bi na ha.” 30 Ugbu a e bukọọrọ ihe niile i nwere, gịnị ka ị ga-eme, ebe ọ bụ na ị na-eyibu ákwà dị oké ọnụ ahịa,* ebe ọ bụ na ị na-ejibu ihe ịchọ mma ọlaedo achọ onwe gị mma, ebe ọ bụ na ị na-etebu uri anya ka anya gị buo ibu?+ Ọ bụ n’efu ka ị na-achọbu onwe gị mma.+ Ndị ọ na-agụ agụụ ka gị na ha nwee mmekọahụ ajụwo gị; ha anọwo na-achọ mkpụrụ obi gị.+ 31 N’ihi na m nụrụ olu yiri nke nwaanyị na-arịa ọrịa, mkpu ákwá nke na-ada ka nke nwaanyị na-amụ nwa mbụ ya,+ bụ́ olu ada bụ́ Zayọn, onye ọ na-esiri ike ikute ume. Ọ gbasara ọbụ aka ya,+ na-asị: “Efuola m, n’ihi na ike agwụwo mkpụrụ obi m n’ihi ndị na-egbu mmadụ!”+
^ Otú e si dee ya n’asụsụ Hibru bụ “ákwà na-acha uhie uhie,” ya bụ, ákwà na-acha uhie uhie nke dị oké ọnụ ahịa.